Sacuudiga ma ka fileysay tartanka heesaha iyo qoob ka cayaarka? – AwKutub News
By awkutubnews January 25, 2019 January 25, 2019
Leave a Comment on Sacuudiga ma ka fileysay tartanka heesaha iyo qoob ka cayaarka?
Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa shaaca ka qaaday qorshe in badan ay ku howlaneyd oo ahaa in la sameeyo goobo dadka lagu maaweeliyo sida tartamada weyrixinta Dibida ee ka jira dalka Spain, in sare loo qaado sameynta goobaha madadaalada waa tallaabo uu garwadeen ka yahay dhaxal sugaha Maxamed Bin Salmaan.
Sacuudiga wuxuu ku rajo weyn yahay inuu bilaabo goobo lagu soo bandhigo tartanka quruxda haweenka iyo tartamada heesaha qoob ka ciyaarka.
Hay’adda Madadaalada Sacuudiga
Madaxa madadaalada Sucuudiga Turki Al Sheekh ayaa sheegay inuu doonayo in tallaabadan uu ku soo xareeyo balaayin doolar oo dhakhli ah.
Isku dayga ah in Sucuudiga uu noqdo xarunta madadaallada ee gobolka waxaa majaraha u haya dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed Bin Salmaan.
Dhaxal sugaha Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan.
Maxamed Bin Salmaan iyo dalkiisaba waxaa soo foodsaartay dhibaato dhanka sumcadda kaddib dilkii weriye Jamaal Khaashuqji, in kasta oo ay beeniyeen arrintaas.
Xilli Talaadadii uu daahfurayay Istiraatiijiyadda madadaalada ee xukuumadda Riyaadh, Al Sheekh wuxuu soo hadal qaaday tiro kamid ah waxyaabaha ay doonayaan inay kusoo bandhigaan tartamadaasi.
Waxaana kamid ah tartanka dagaalka Dibida, ciyaaraha internet-ka, heesaha qoob ka ciyaarka iyo kubadda koleyga.
Tartanka Quraanka Kariimka ayaa kamid ah waxyaabaha lasoo bandhigi doono, qofkii ku guuleystay Quraanka wuxuu heli doonaa abaal marin gaareysa 1.3 milyan oo doolar halka la qaban doono bandhigyo ah sida loo tukado salaadda iyo Aadaanka.
Tartanka waxaa sidoo kale kamid ah mid lagu tartamayo sixirka iyo faalka inkasta oo ay dambi yihiin.
“Waxaan rajeynayaa in dhammaan shirkadaha, bangiyada iyo ganacsatada inay garab na siiyaan, waa fursado dahabi ah” ayuu yiri madaxa barnaamijkan.
Tags: Carabta Sacuudiga Wararka
Previous Entry Boqor isku casilay Gabadh uu jecelyahay daraadeed.
Next Entry Wararkii u dambeeyey ee Wadahadalladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Daalibaan